एफए फुटबल प्रतियोगिता:चेल्सीद्वारा पिटरबोरो युनाईटेड ४–१ ले पराजित::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
एफए फुटबल प्रतियोगिता:चेल्सीद्वारा पिटरबोरो युनाईटेड ४–१ ले पराजित
इङ्ल्यान्डको प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता एफए कपमा चेल्सीले सहज जित हात पारेको छ । गएराति भएको खेलमा चेल्सीले तेस्रो श्रेणीको क्लब पिटरबोरो युनाईटेडलाई ४–१ ले पराजित गर्‍यो । खेलमा चेल्सीलाई विजयी गराउन पेड्राले दुई गोल गरे भने मिची बात्सुई र विलियनले एक–एक गोल गरे ।
जितपछि चेल्सी एफए कप फुटबल प्रतियोगिताको चौथो चरणमा प्रवेश गरेको छ । एफए कप अन्तर्गत गएराति भएको अर्को खेलमा लिभरपुललाई प्लाईमाउथले गोलरहित बराबरीमा रोकेको छ । बराबरीसँगै लिभरपुलले अब प्लाईमाउथसँग उसैको मैदानमा दोस्रो खेल खेल्नुपर्ने भएको छ ।
गएराति भएको अर्को खेलमा फुलह्यामले कार्डिफ सिटीलाई २–१ ले हराउँदा टोटनह्याम हट्सपरले एस्टन भिल्लालाई २–० ले तथा मिडिल्सब्रोले सेफिल्ड वेनस्डेलाई ३–० ले हराएको छ ।
नेपालबाट ४० जनाले रसिया गई विश्वकप फुटबल हेर्न पाउने, को-को परे त सुचीमा ?
एफए कप : म्यानचेस्टर सिटी बाहिरियो
विश्वकप क्रिकेट छनोट खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा
खेलाडीले एउटै खेलमा १० वटा रातो कार्ड पाएपछि